बेनीमा ११० घरका खरको छाना हटाएर राखियाे जस्ताको छाना – Samacharpati
बेनीमा ११० घरका खरको छाना हटाएर राखियाे जस्ताको छाना
म्याग्दी, ५ भदौ । बेनी नगरपालिकामा ११० वटा घरमा खरको छाना हटाएर जस्ताको छाना राखिएको छ । बेनी नगरपालिकाको सहयोगमा घरधनीले खरको हटाएर जस्तापाटा राखेका हुन् ।
सबैभन्दा बढी वडा नं ३ मा पर्ने भकिम्लीमा ६१ घरमा जस्ताको छाना राखिएको बेनी नगरपालिकाका प्राविधिक अर्जुन थापाले जानकारी दिनुभयो ।
सदरमुकाम बेनी बजार अवस्थित ७ र ८ नं बाहेक रत्नेचौर, भकिम्ली, ज्यामरुककोट, सिंगा, पुलाचौर, अर्थुङ्गे, घतान र पात्लेखेतमा खरको छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।
छाना फेर्नका लागि जस्तापाटा खरिद गर्न प्राविधिकले तयार पारेको लगतअनुसार एक जनाले पैतिस हजार रुपैयाँसम्म अनुदान पाएका छन् । वडा कार्यालयले सङ्कलन गरेको आवेदनको आधारमा छनोट गरिएका घरधनीलाई छानो फेरेपछि अनुदान दिइएको थियो ।
खरको छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रमका लागि रु. ७० लाख विनियोजन भएकोमा रु.४१ लाख भुक्तानी भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छवीलाल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष छुटेकालाई यस वर्षको कार्यक्रमबाट समेटिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
आगलागीबाट हुने दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न खरको छाना विस्थापित गर्न नगरवासीलाई सत प्रतिशत अनुदानमा जस्तापाटा उपलब्ध गराएको नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
खरको छानाको घरमा आगलागीको उच्च जोखिम हुन्छ । छानामा जस्तापाटा राखेपछि दुर्घटनाको जोखिम घट्नुका साथै वर्षेनि खर, बाँस किनेर छाउनुपर्ने झन्झटबाट नगरवासीले मुक्ति पाएको बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीका रनबिर घर्तीले बताउनुभयो ।
स्थानीयबासीले सुरक्षित महशुस गरेका छन् । आर्थिक अभावमा गुज्रिएका विपन्न समुदाय खरको छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका भकिम्लीका वडा अध्यक्ष पदम पुनले बताउनुभयो ।
खर कुहिएर पानी चुहिने र भित्रै घाम पस्ने समस्या हटेकोमा उनिहरु खुसी भएका छन् । जस्तापाटा पाएपछि कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीको फुर्सदमा आफैँ खर फालेर छाना फेरेका थिए । छाना हटाउने क्रममा जीर्ण बनेका घरहरुको मर्मत गरेका छन् ।
लामखुट्टेले टोक्दा के छोड्छ छालामा , जान्नुहोस् त्यसको बारेमा !!
केपी शर्मा ओली,पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवालाई गाली गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ
आइसोलेसनमा रहेको छाेराले गर्ने पाएन्न बाबुको काजक्रिया